रङ्गहरूको पनि हुन्छ भाषा – CentralKhabar – No 1 Online News Portal from Nepal
सेन्ट्रल डेस्क प्रकाशित मिति : २२ जेष्ठ २०७८, शनिबार १०:२६
यो कुनै ठट्टा हैन प्रयोग भएको/गरेको उपाय हो । यसको प्रयोग संसारभरिका मनोचिकित्सकहरूले आफ्ना रोगीहरूको उपचारमा गरिसकेका छन् । तनावबाट मुक्तिको यो सस्तो र सुन्दर उपाय युरोपेली देशहरूमा ‘आर्ट थेरोपी’ को नामबाट चिनिन्छ ।
आज रङ्गहरूको प्रयोग केवल रोग निको पार्न मात्र हैन, आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरूको व्यक्तिìवलाई पनि बुझ्नका लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
अरस्तु भन्छन्- ”रङ्गहरूको आफ्नो स्वायत्तता हुँदैन, ताकि प्रकाश र अन्धकारले नै रङ्गहरूलाई जन्म दिने गर्दछ ।” उनले कालो र सेतो रङ्गको अस्तित्वलाई कहिल्यै स्वीकार गरेन । तर विश्वप्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्दो दा भिन्चीको भनाई छ कि- ”कालो र सेतो रङ्गलाई सौन्दर्य शास्त्रीले स्वीकार गरुन् वा नगरुन् तर एक कलाकारले कालो र सेतो रङ्ग बिना केही गर्न सक्दैनन् ।”
सन् १६६० मा सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटनले रङ्गहरूको प्रकृतिको बारेमा गहन अध्ययन गरेर रङ्गहरूको गुण र वस्तुस्थितिलाई सर्वमान्य गरिदिए । उनले भनेकि- ”वास्तविकता यो हो कि रङ्ग एकप्रकारको अनुभूति हो, जुन परावर्तित प्रकाश हाम्रो आँखामा पर्दछ । वास्तवमा प्रकाश नै रङ्गको मूल स्रोत हो, प्रकाश नभए रङ्गहरूको स्वयंमा कुनै अस्तिìव हुँदैन ।”
सबैभन्दा पहिले याद गरिरहनु पर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि वस्तुको रङ्ग आफैं तयार भएको हुँदैन । वस्तुहरूको विभिन्न रङ्ग देखिनुमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका प्रकाशको हुन्छ । सूर्यको किरणमा रातो, नीलो, हरियो, पँहेलो, सुनौलो, बैजनी तथा आकाशे नीलो गरी जम्मा सात रङ्गहरू हुन्छन् । सूर्यका यिनै सात रङ्गहरूबाट छुट्टाछुट्टै किसिमले वा रङ्ग मिश्रण हुँदा अलग अगल वस्तुका बेग्लाबेग्लै रङ्गहरू छुट्टन्िछन् । वस्तुले सूर्यको कुन रङ्गलाई परावर्तित गर्छ त्यही रङ्ग हाम्रो आँखामा पर्दछ ।
विभिन्न रङ्गहरूले हाम्रा इन्दि्रयहरूलाई आकषिर्त गर्दछन् र भावना तथा आवेगको प्रवाहलाई अभिव्यक्त गर्नमा हामीलाई सहयोग गर्दछन् । रङ्गले हाम्रो वरिपरिको वातावरणलाई पनि आनन्दमय र खुशीलायीपूर्ण बनाइदिन्छ । हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि रङ्गले सूचना दिने काममा विशेष भूमिका खेल्ने गर्दछ । हामी बाटो काट्दा रातो बत्ती बल्दा रोकिन्छांै भने हरियो बत्ती बल्दा बाटो काट्छौं । यी रङ्गहरूका भाषा हुन् । रङ्गहरूद्वारा नै हामी यो पत्ता लगाउँछौ कि कुन फलफूल पाकेको छ, कुन काँचो छ । कुन सागसब्जी ताजा हो वा बासी आदि । यस प्रकार दैनिक जीवनमा पनि रङ्गले हामीमा घाम-छायाँले जत्तिकै प्रभाव पारिरहन्छ ।
तपाईंले सोच्नुभएको छ, जब तपाईं बजारमा किनमेल गर्न जानुहुन्छ, त्यहाँ तपाईंले आफूलाई मनपर्ने रङ्गको लुगा वा अन्य वस्तुनै छान्नु हुन्छ किन ? रङ्गहरूको यो छनौट आफ्नो रूचि मात्र नभई व्यक्तिìवको पनि प्रतीक मानिन्छ ।
भावनाको स्तरमा रङ्गले हामीलाई विशेष प्रभाव पार्ने गर्दछ । यो प्रभाव गर्मी वा जाडो, खुशीयाली वा दुःखी, उदासीन वा उत्तेजक, उज्यालो वा अँध्यारोमा पर्नसक्छ । गर्मीमा रङ्ग घामको प्रकाशको नजिक हुन्छ । गर्मी र उत्तेजनालाई दर्शाउँछ भने दोश्रो चिसो रङ्ग शान्ति र आनन्दको प्रतीक मानिन्छ । यसरी प्रत्येक रङ्गको एक विशेष प्रभाव हाम्रो मस्तिष्क र शरीरमा पर्ने गर्दछ ।
सेतोः- यो सम्पूर्ण रङ्गहरूको सन्तुलित रङ्ग मानिन्छ । यसमा इन्द्रधनुषको सातै रङ्ग मिल्दछ । यो विविधतामा एकता प्रदान गर्ने पवित्र रङ्ग हो । यो अहिंसा र शान्तिको प्रतीक पनि हो । तपाईंको मनपर्ने रङ्ग सेतो भएमा यसको अर्थ हुन्छ तपाईं कुनै पनि कार्य धैर्यपूर्वक गर्ने संयमी र इमानदार व्यक्ति हुनुहुन्छ । तपाईं खुल्ला हृदय र स्पष्टवादी हुनुहुन्छ, तर सजिलैसँग सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न । धेरै मानिसले तपाइर्ंलाई अव्यवहारिक र खरो ठान्छन् । छक्का पञ्जा गर्न नजान्ने, खुल्ला विचारधारा भएकोले अन्य व्यक्तिहरूले तपाईंलाई नजिकबाट बुझ्न सक्छन् । यसैगरी, सेतो रङ्गले सूर्यको किरणबाट उत्पन्न हुने तातोपनबाट शरीरलाई जोगाउँछ । गर्मीमा सेतो लुगा लगाउँदा शरीरलाई फाइदा गर्दछ ।
कालोः-ः यो अन्धकार, निन्द्रा र अज्ञानलाई उत्पन्न गर्ने रङ्ग मानिन्छ । कालो रङ्ग अपशकुनको प्रतीक हो । कालो रङ्गमा राम्रो-नराम्रो सबै विलय भएको हुन्छ । त्यसैले ‘काली देवी’ लाई सर्वव्यापी मानिएको हो । उनी ज्ञानको प्रकाश दिनका लागि स्वयं अन्धकारमा विलीन हुने गर्दछिन् । कालो रङ्ग रातो, पहेँलो र नीलोको संगम हो । यसको पनि ठीक ठाउँमा प्रयोग गरेमा फाइदा नै हुन्छ । कालो रङ्ग मन पराउने व्यक्ति दृढ इच्छा शक्ति भएका हुन्छन् ।
पँहेलोः- पँहेलो रङ्ग पृथ्वीबाट आएको मानिन्छ । यो एक ज्योतिबाट प्रकाशमान रहन्छ । यसलाई हेर्नाले मन र हृदयमा विशिष्ट ज्ञान र प्रकाशको अनुभव हुने गर्दछ । यसलाई आध्यात्मिक शक्तिको प्रतीक मान्नेहरू पनि धेरै छन् । यसैले यो धर्मात्माहरूलाई अधिक मनपर्ने रङ्गमा गनिन्छ । देवी-देवताहरू र धार्मिक कार्यहरूमा र अन्य विविध आयोजनाहरूमा पँहेलो रङ्गको टीका, कपडा राम्रो मानिन्छ । हल्का पँहेलो रङ्ग आदर्शवादी, स्वप्नवादी र बढी कल्पनाशीलताको प्रतीक हो ।
नीलोः- यो रङ्ग स्वच्छता, शीतलता र शुद्धताको प्रतीक हो । यो प्रेमको पनि प्रतीक मानिन्छ । याद गर्नुस् त तपाईंको केटा साथीले पठाएको पत्र- के त्यसको खामको नीलो छ ? नीलो रङ्गले मनको अन्धकारलाई फालेर ज्ञानको प्रकाश फैलाउने गर्दछ । यो रङ्ग वैज्ञानिकहरू, लेखकहरू, चित्रकारहरू, प्रेमी-प्रेमिकाहरू र सृजनामा जुटेका हरेक व्यक्तिको पि्रय मानिन्छ । यस रङ्गले व्यक्तिको मौलिक रचना गर्ने, खोज गर्ने र कल्पना गर्नेलाई बढी प्रेरित गर्ने गर्दछ । एकाग्रता तथा विचार सन्तुलनको प्रभाव यसै रङ्गद्वारा प्राप्त हुन्छ । क्रोधलाई नाश गर्ने र आँखाको विकार टाढा गर्नमा यो रङ्ग लाभदायक सिद्ध भएको छ । तसर्थ दिनभरिको कठिन परिश्रमपछि नीलो रङ्ग पोतिएको कोठामा एकैछिन आराम गर्दा पनि त्यसले मस्तिष्कमा छिट्टै आराम दिलाउँछ भन्ने मनोचिकित्सकहरूको तर्क छ ।
रातोः- यो क्रान्तिकारी वीर योद्धाहरू, विजेताहरू र जन-नेताहरूको पि्रय रङ्ग हो । रातो रङ्गलाई मन पराउने व्यक्ति जीवनमा निरन्तर सक्रिय रहिरहन्छ । उनीहरू दृढनिश्चयी पनि हुन्छन् । यो रङ्ग हृदयमा अपूर्व शक्तिको सञ्चार गनुका साथै उत्साह र साहस पैदा गर्ने खालको हुन्छ । यसलाई मन पराउने व्यक्ति सदा आफ्नो क्षेत्रमा अग्रपङ्िक्तमा रहने हुन्छ ।
तथापि यो रङ्ग क्रोध र उत्तेजनाको पनि प्रतीक हो । यसले प्रेमको मौन भाषालाई पनि दर्शाउँदछ । यसै कारणले हो कि प्रेम दिवस -भ्यालेन्टाइन डे) मा सबै प्रेमी आफ्नो प्रेमिकालाई रातो गुलाफ दिन मन पराउँछ र प्रेमिकाहरू पनि रातो गुलाफ पाएर भावविभोर हुन्छन् ।
हरियोः- यस रङ्गले शीतलता, स्फूर्ति तथा पुनर्जीवन उत्पन्न गर्दछ । यसबाट नवीन शक्तिको सञ्चार हुने गर्दछ । यही कारण हो कि बोटबिरुवालाई घरमा सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार गर्नका लागि रोप्ने गरिन्छ । हरियो रङ्ग नीलो र पहेँलोको सम्मिश्रण हो । यो रङ्ग आँखाका लागि फाइदाजनक मानिन्छ र धेरैबेर हरियो रङ्ग -बोट बिरुवा आदि) हेरिरहे पनि हानी गर्दैन । यदि तपाईंलाई हरियो रङ्ग मन पर्दछ भने सम्भव छ तपाईर्को राशी मेष या कन्या हो । तपाईं व्यवहारिक तथा वफादारी हुनुहुन्छ र आफ्नो सन्तुलन कहिले पनि गुमाउनुहुन्न । जहाँ तपाईं काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईंलाई विश्वासपात्र मानिन्छ र तपाईंले सजिलैसँग काममा प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ ।
सेन्ट्रल डेस्क 1022 posts0comments
अतीन्द्रीय शक्तिको रहस्य मानसिक शक्ति यसरी हासिल गर्ने
‘ सम्पति सार्वजनिक ‘ गर्दैमा ज्ञवालीको प्रशंसा गर्नु ठिक होइन : अनमोलमणि